ဇန္နဝါရီလ 20, 2011 တွင် 1:35 ညနေ
ကိုယ့်အဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်ငါသည်ငါ့ဘလော့ဂ် avinashtech.com အပေါ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဘာသာပြန်ချက်ရတဲ့ပါ၏.
plugin မတိုင်ခင်ဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်. ယခုမူကားအသစ်အပို့စ်များအများစုပင်ကို manually ဘာသာပြန်ထားသောမ်ကြသည်မဟုတ်.
ဇန္နဝါရီလ 20, 2011 တွင် 5:27 ညနေ
ထွက်ထောက်ပြအဖြစ်, အဲဒါကို default jQuery အတူ cache ကိုပြဿနာကြီး. ကိုယ့် w3 စုစုပေါင်း cache ကိုအတွင်းအပြင်ကြောင့် fixed. အခုတော့နောက်တဖန်အကြီးအလုပ်ဖြစ်တယ်.
ဇန္နဝါရီလ 20, 2011 တွင် 11:57 ညနေ
big thumb တက်! ကို meta ဘာသာပြန်ချက်ကြည့်ဖို့ဝမျးမွောကျ inplace ယခုဖြစ်ပါတယ်, ငါအဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြီးတွေတ.